Adeegso Tilmaamahan iyo Aaladahaan si aad uga guuleysato culeyskaaga Suuqgeynta | Martech Zone
Haddii aad rabto inaad si wax ku ool ah u maamusho culeyskaaga shaqo ee suuq-geynta, waa inaad qabataa shaqo fiican oo ah abaabulka maalintaada, dib-u-qiimeynta shabakaddaada, sameynta habab caafimaad leh, iyo ka faa'iideysiga barnaamijyada kaa caawin kara.
Qaado Teknolojiyad kaa caawinaysa inaad diirada saarto
Sababtoo ah waxaan ahay nin farsamo yaqaan ah, waxaan ku bilaabi doonaa taas. Ma hubo waxa aan sameyn lahaa la'aantood Brightpod, Nidaamka aan u adeegsado kala-hormarinta howlaha, isku soo wada uruurinta howlaha marxaladaha kala duwan, iyo in aan macaamiishayda la socodsiiyo horumarka ay kooxaheennu sameynayaan. Qaybta ugu dambeysa waa mid muhiim ah - Waxaan badanaa ogaaday in markay macaamiishu arkaan xaaladda hadda jira ee mashaariicda iyo dib u dhaca muuqaal ahaan, waxay u muuqdaan inay dib uga laabtaan codsiyada dheeraadka ah. Intaa waxaa sii dheer, waxay i siisaa fursad aan caadi aheyn markii arrimo deg deg ah ay soo ifbaxaan si aan ula shaqeeyo macaamiishayda haddii ay rabaan inay kordhiyaan miisaaniyadda si wax looga qabto, ama aan ka leexanno mudnaanta oo aan dib ugu laabanno taariikhihii loo baahnaa in la keeno.
Oo ay la socdaan maamulka mashruuca, maaraynta kalandarka had iyo jeer waa dhaliil. Ma haysto shirar subaxnimo (tan ka dib akhri) waxaanan ku soo koobayaa kulamadayda isku-xidhka hal maalin usbuucii. Waan jeclahay la kulanka dadka, laakiin markasta oo aan is gacan qaado… caadiyan waxay u horseedaa shaqo badan saxankayga. Joojinta jadwalkayga ayaa muhiim u ahaa guusha waqtiga si loo helo dhammaystirka shaqada dakhli-abuurista.
Ka faa'iidayso jadwalka codsiyada in la gorgortamo oo la dejiyo waqtiyada kulanka. Emailada jadwalka gadaal iyo gadaalba waa waqti lumis aanad mar dambe u baahnayn. Waxaan leeyahay mid ka mid ah baraha sheekaysiga boggeyga fakadaan.
Ku Dhammee Hawlahaaga Ugu Adag ee Subaxnimada
Waxaan hubin jiray emailkayga subax kasta. Nasiib darrose, socodka marna ma joogsan maalintii oo dhan. Kudar wicitaanada taleefanada iyo kulamada jadwalka leh, waxaanan badanaa isweydiinayaa hadii wax uun aan qabtay maalintii oo dhan. Markaa waxaan gubi lahaa saliida saqda dhexe anigoo isku dayaya inaan qabsado oo aan isu diyaariyo maalinta xigta. Tan iyo markii aan dib u rogay maalintaydii - ka shaqaynta emaylka iyo cod-bixinta kaliya kadib markii aan dhammaystiray howlaha muhiimka ah ee maalinta.
Daraasado badan ayaa muujiyay in shakhsiyaadka ay tahay inay isku dayaan inay qabtaan hawlo waaweyn inta lagu jiro subaxa. Adoo adeegsanaya istaraatiijiyadan, suuqleydu waxay diirada saari karaan feejignaantooda waxayna ka saari karaan waxyaabaha mashquuliya (inta badan waxaan ka shaqeeyaa guriga subixii iyadoo taleefankayga iyo emaylkayguna dansan yihiin). Dhaqdhaqaaq howlahaaga yar wixii ka dambeeya 1:30 pm, waxaadna yareyn doontaa heerarka walaacaaga, waxaadna yareyn doontaa saameynta daalka, waxaadna kordhin doontaa tirada howlaha muhiimka ah ee kaa dhigaya inaad guuleysato.
Ugu dambeyntii, waa sayniska! Kadib maalin wax soo saar leh iyo hurdo weyn habeenki, maskaxda shaqsi waxay leedahay heer aad u sareeya oo ah dawada loo yaqaan 'dopamine'. Dopamine waa dhisme hagaajinaya dhiirigelinta, kobcin kara tamarta, iyo hagaajinta fekerka muhiimka ah. Markaad dhammaystirto howlaha waaweyn, maskaxdaadu waxay kaloo soo saartaa norepinephrine dheeraad ah, walax dabiici ah oo xoojiya diiradda, kordhinta wax soosaarka iyo yareynta buuqa. Haddii aad ku dhibtooneysid inaad ballan qaaddo mashruuc maalintii oo dhan, oo aad ka shaqeysid habeen dambe adiga oo raad ku yeelaya hurdadaada, waxaad u badan tahay inaad toosayso adigoo caajis ah oo aan dhiirrigelin lahayn. Sharci dopemine-kaaga si aad u nidaamiso dhiirigelintaada!
Ha isku dayin - abaalmarin shaqadaada adag adoo hubinaya warbaahinta bulshada iyo emaylka kadib markaad dhameyso mashruucaaga subaxa ah ama mashaariicdaada. Waad la yaabi doontaa sida maalmahaagu u weynaan doonaan!
Faahfaahin waxyaabahaaga muhiimka ah
Waxaan u maleyn jiray sida labaad ee aan ugu dhawaado mashaariicda waaweyn. Waxaan ku bilaabaa hadafyo, abuuraa khariidad si aan u gaaro himilooyinkaas, ka dibna waxaan u hawl galayaa tallaabo kasta. Markaan la shaqeeyo macmiisha, marwalba waan layaabaa diiradooda ama walaacyada aynaan wali kahadlin. Waxaan ka walwalayaa Talaabada 1, waxay iweydiinayaan talaabada 14. Waxaan si joogto ah u dareemayaa macaamiishayda inay diirada saaraan howsha gacanta ku haysa. Tani macnaheedu maahan inaanan aheyn kuwa kacsan, waxaan si joogta ah dib u qiimeyn ugu sameynaa istiraatiijiyadeena marka la eego ujeedooyinka isla markaana aan ula qabsano si waafaqsan.
Maxay yihiin yoolalkaagu? Ma la jaan qaadayaan yoolalka ururkaaga? Hadafyadaadu ma horumarin doonaan astaantaada? Xirfadaada? Dakhligaaga ama dakhligaaga? Inaad ka bilowdid yoolalkaaga maskaxdaada oo aad si faahfaahsan uga warrameyso hawlaha ku saabsan dhacdooyinkaas waaweyn waxay u caddaynaysaa maalintaada shaqada. Sannadkii hore, waxaan gooyay iskaashiyo muhiim ah, dhacdooyin muhiim ah, iyo xitaa macaamiil lacag bixin weyn leh markii aan ogaaday inay iga mashquulinayaan himilooyinkeyga muddada-dheer. Way adagtahay in wada hadaladaas lala yeesho dadka, laakiin waa lama huraan haddii aad jeceshahay inaad guuleysato.
Marka, si faahfaahsan u qeex dhacdooyinkaaga muhiimka ah, cadee howlaha ku geyn doona halkaas, tilmaam waxyaalaha kaa horjoogsanaya ee ku joojinaya, oo edbi ku ilaali qorshahaaga guud! Markaad si cad u leedahay sababta aad u sameyneyso waxa aad sameyneyso maalin kasta, waxaad noqoneysaa mid dhiiranaan badan oo aan walwal badan qabin.
Automate waxkasta oo aad ku celiso
Waan necbahay inaan wax laba jeer sameeyo, runtii waan sameeyaa. Halkan waxaa ku yaal tusaale… intaan noolahay oo aan la shaqeynayo mid kasta oo ka mid ah macaamiishayda, inta badan waxaan waqti ku qaataa la shaqeynta shaqaalahooda tifaftirka gudaha ee ku saabsan hagaajinta mashiinka raadinta. Halkii aan ku farsameyn lahaa soo bandhigid markasta iyo marwalba, waxaan hayaa maqaallo dhowr ah oo aan kala socdo taariikhda boggeyga oo ay tixraaci karaan. Maxaa qaadan kara maalmo, badanaa waxay qaadataa saacad ama wax la mid ah maxaa yeelay waxaan u qoray waxyaabo faahfaahsan oo ay tixraacayaan.
Mawduucyadu waa saaxiibkaa! Waxaan hayaa jawaabo jawaabo ah oo ku saabsan jawaabaha emaylka, waxaan hayaa qaabab soo bandhigid sidaa darteed maahan inaan kucusub bilaabo soo bandhigid kasta, waxaan hayaa qaabab soo jeedin hawlgal kasta oo aan la shaqeeyo. Xitaa waxaan haystaa guul muhiim ah iyo mabaadi'da mashruuca ee loogu talagalay bilaabista iyo hagaajinta goobta macmiilka. Kaliya igama badbaadin karto tan waqti ah, sidoo kale waxay ku fiicnaaneysaa macmiil kasta maadaama aan si joogto ah ugu sii wanaajiyo waqtiga.
Dabcan, qaab-dhismeedyadu waxay qaadanayaan xoogaa waqti dheeri ah xagga hore they laakiin waxay kaa badbaadin doonaan nasiibka wadada. Tani waa sidaan u horumarino bogagga sidoo kale, u horumarinno iyaga oo rajeynaya inaad sameyn doontid isbeddello ballaadhan usbuuca soo socda. Adiga oo qabanaya shaqada hore, isbeddelada hoose waxay qaadanayaan waqti iyo dadaal badan.
Nidaam kale oo qaabeysan oo aan adeegsanno ayaa jadwal u sameynta macaamiisheenna wararka ku saabsan warbaahinta bulshada. Waxaan badanaa soo aruurineynaa cusbooneysiinta, waxaanan ku waafajineynaa jadwalka taariikhda, oo waxaan u qorsheynay sanad cusub oo cusbooneysiin ah kuwa raacsan si ay u milmaan. Kaliya waxay qaadataa maalin ama wax la mid ah - oo macaamiisheennu way la yaaban yihiin inaan hadda qaadanay sannad oo aan la yaabanahay waxa ay ku dhejinayaan liistadooda. PS: Waan jecel nahay kafaalaqaadkeena Agorapulse ee xulashooyinka safka iyo jadwalka cusboonaysiinta bulshada!
Dila Kalabar Kulamadaada
Warbixinno badan ayaa soo jeediyay in ka badan boqolkiiba 50 shirarka aan loo baahnayn. Eeg miiska hareerahaaga marka xigta ee aad shirayso, ka fikir inta lacag ah ee lagu kharash gareeyay kulankaas mushaaraadka, ka dibna u fiirso natiijada ka soo baxda. Miyey u qalantay? Marar dhif ah.
Shaqooyinka ugu fiican fanka weligood laguma abuurin kulan, dadweynow. Waan ka xumahay laakiin iskaashiga mashaariicda suuq-geynta ayaa kaliya natiijooyinka ka soo baxa ugu hooseeya. Waxaad kiraysatay xirfadlayaal si ay hawshu udhamaato, markaa kala qaybi oo guuleysta. Waxaa laga yaabaa inaan haysto darsin kheyraad ka shaqeynaya isla mashruuc - inbadan oo isku mar ah - marar dhif ahna aan ka helo dhammaantood isla wacitaan ama qol isku mid ah. Waxaan abuureynaa aragtida, ka dibna waxaan bilaabaynaa ilaha lagama maarmaanka u ah in aan halkaa tagno, inta aan toosinayno taraafikada si loo yareeyo shilalka.
Haddii lagaa filayo inaad ka soo qayb gasho kulan, waa kuwan taladaydu:
Kaliya aqbal martiqaadka kulanka haddii qofka ku casuumay uu sharxo sababta ay ugu baahan yihiin inaad ka soo qayb gasho. Waxaan ka shaqeeyey shirkad weyn oo aan uga soo baxay 40 kulan usbuucii ilaa 2 kaliya markii aan dadka u sheegay inaanan ka soo qayb geli karin ilaa ay sharraxaan sababta.
Kaliya aqbal shirarka ajandaha lagu faahfaahiyay hadafka kulanka iyo waqtiyada qayb kasta kulanka. Habkani wuxuu dilaa tan tan shirarka - gaar ahaan shirarka soo noqnoqda.
Kaliya aqbal kulamada isuduwaha kulanka, ilaaliyaha waqtiga kulanka, iyo duubista kulanka. Isku-duwaha wuxuu u baahan yahay inuu qayb walba oo kulanka ka mid ah ku hayo mowduuca, waqtiga ilaaliyaha ayaa kulanka ku ilaaliya waqtiga loogu talagalay, rikoodhkuna wuxuu u qaybiyaa qoraallada iyo qorshe hawleedka.
Kaliya aqbal shirarka ku dhammaada qorshe hawleed faahfaahsan oo ah cidda qabanaysa waxa, iyo goorta ay ku fulinayaan. Ka dibna la xisaabtanka dadkaas - dib ugu soo noqoshada maalgashigaaga kulanku wuxuu ku saleysan yahay awooddooda ay u leeyihiin inay si dhakhso leh u dhammaystiraan waxyaabaha waxqabadka ah. Ka fogow waxyaabaha ficil-ku-saleysan koox-kooxeed doesn't haddii shaqsi uusan laheyn howl, lama qaban doono.
Haddii boqolkiiba 50 shirarka ay yihiin waqti lumis, maxaa ku dhici doona usbuucaaga shaqada markii aad diido ka qeybgalka kalabar?
Dibadda Waxaad Ka Nuugto
Waqtiga ay qaadaneyso inaad barato naftaada sida wax loo sameeyo ama loo xaliyo mushkilad aadan aqoon u laheyn kaliya ma ahan burburinta wax soo saarkaaga, laakiin adiga iyo shirkadaada ayaa qiimo u leh. Haddii aad tahay ganacsade, waxaad lacag heleysaa markaad qabanayso wixii lagaa rabay. Wax kasta oo kale waa in lala wareegaa wada-hawlgalayaasha. Waxaan hayaa daraasiin qandaraaslayaal hoose ah oo aan ugu yeerayo wax kasta oo laga bilaabo sawir-qaadista madax-xanuunka, illaa dhisidda emayllada jawaabta leh, si loo baaro boggayaga soo socda. Kooxaha aan isku keenay waa kuwa ugu fiican, si wanaagsan ayaa loo qaataa, waligoodna ha iga dhigin. Waxay qaadatay toban sano in la isu geeyo, laakiin way u qalantay maxaa yeelay waxaan diirada saarayaa waxa ka dhigaya ganacsigeygu inuu si fiican u socdo.
Toddobaadkan, tusaale ahaan, macmiil ayaa ii yimid arrin ay ka shaqeynayeen muddo bilo ah. Kooxda horumarinta ayaa bilooyin ku qaatay dhismaha nidaam waxayna hada u sheegeen milkiilaha ganacsiga inay qaadaneyso dhowr bilood oo dheeri ah si loo saxo. Sababta oo ah waxaan lasocday isku dhafkooda iyo khabiir ku ah waxsoosaarka, waan ogaa inaan liis gareyn karno wax aad ugayar. Dhowr boqol oo doolar, barnaamijkooda hadda si buuxda ayaa loo dhexgeliyey… iyo taageero iyo casriyayn. Hadda kooxdooda horumarineed waa loo sii dayn karaa inay ka shaqeeyaan arrimaha aasaasiga ah ee madasha.
Maxaa kugu qaadanaya waqti dheer inaad dhammaystirto? Ayaa ku caawin kara? Jaantus hab aad ku bixin karto adiguna waad ku farxi doontaa sidaad sameysay!
Tags: ururi dib u eegistaarrimahaqaybinta warsaxaafadeedmiisaankaaragtida bulshada
Waqti loogu talagalay Xilliga Gu'ga-Istiraatiijiyadda Suuqgeyntaada
Agoosto 10, 2009 saacaddu markay ahayd 8:02 PM
Waad ku mahadsantahay tilmaanta weyn ee Tungle. Waxaan isticmaalayay maalmo yar ka dib waana wax fiican! Waxaan ka shaqeeyaa toddobada jadwal ee kaladuwan ee Google ee loogu talagalay biz, qoyskeyga, iskuulka, kaniisadda, HOA iyo ururrada kale waxaana helaa wicitaano badan, emayl iyo SMS dadka doonaya inay ogaadaan haddii aan diyaar u ahay inaan la kulmo. Sidaan hadalka ugu gaadhsiiyey waxaas oo dhan waa inay ii noqotaa waqti weyn oo aniga ilaaliya oo aan rajeynayo iyaga.
BTW - waxaa jira barnaamij Ning ah laakiin wuxuu ku leeyahay cillad taas oo ragga tiknoolajiyadda Tungle ay hadda ku shaqeynayaan. Waxay ku andacoodaan in lagu hagaajin doono maalmo yar gudahood.
Agoosto 10, 2009 saacaddu markay ahayd 11:06 PM
Waad ku mahadsan tahay qaylada, Doug! Tungle wuxuu ii ahaa aalad aad u wanaagsan waana ku faraxsanahay inaad adigu sidoo kale jeceshahay. Waxaan rajeynayaa kulankeena 🙂
Aug 27, 2009 at 3: 09 AM
Waad ku mahadsan tahay inaad ii sheegto Tungle. Waxay u egtahay adeeg aad u wanaagsan waxaanan maqlay dad tiro ah oo qalabkan kula wadaagaya waaya-aragnimadooda wanaagsan. Waxay u egtahay inaan isku dayo.